Arụ ọrụ: Omume Kacha Mma maka Akpaaka Ngalaba Azụmaahịa Taa. Martech Zone
Na oge nke ire ahia ọdịnaya, mkpọsa PPC na ngwa mkpanaka, akụrụngwa ochie dịka pen na akwụkwọ enweghị ebe ọ bụla na ahịa ahịa taa. Otú ọ dị, oge na oge ọzọ, ndị na-ere ahịa na-alaghachi na ngwá ọrụ oge ochie maka usoro ha dị mkpa, na-ahapụ mkpọsa maka njehie na nkwukọrịta.
Itinye n'ọrụ arụ ọrụ arụmọrụ bụ otu n'ime ụzọ kacha mma iji wepụta adịghị ike ndị a. Site na ngwaọrụ ndị ka mma, ndị na-ere ahịa nwere ike ịkọwapụta ma rụọ ọrụ ugboro ugboro ha, rụọ ọrụ siri ike, na-ebelata ihe ize ndụ nke njehie na ịmepụta net nchekwa iji gbochie dọkụmentị na-efu na igbe mbata. Site na ịkọwapụta arụmọrụ, ndị na-ere ahịa na-eweghachi oge n'izu ha iji kwado ma mepụta mkpọsa zuru ezu ọsọ ọsọ na ịrụ ọrụ nke ọma.
Akpaaka bụ ebe dị mfe iji mee ka ọrụ ndị a na-ahụkarị, site na nyocha echiche okike iji kwado mmefu ego, n'ọdịnihu. Otú ọ dị, ọ dịghị mgbanwe na-enweghị nsogbu ya. Ndị a bụ isi ihe isi ihe mgbu dị iche iche na-ezute mgbe ha na-aga n'ihu na akpaaka arụmọrụ, yana otu ndị na-ere ahịa nwere ike isi gbaa gburugburu:
Education: Adome ihe ịga nke ọma teknụzụ akpaaka arụ ọrụ dabere na ịnwe nkwado nke ngalaba (ma ọ bụ, nzukọ) zuru oke. Nkà na ụzụ ọhụụ - na akụrụngwa ọkachasị - ebutela nchegbu gbasara nchekwa ọrụ kemgbe mgbanwe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Nchegbu a, nke na-esiteghi na teknụzụ kama ọ bụ site na egwu dị egwu nke ihe a na-amaghị ama, nwere ike igbochi nnabata tupu ịmalite. Ndị isi ahịa azụmaahịa na-akụziri ndị otu ha uru ọ bara maka akpaaka, ọ ga-adị mfe iji belata nrụgide nke mgbanwe. Na mbido usoro agụmakwụkwọ, ekwesịrị itinye akpaaka dị ka ngwa ọrụ na-ewepụ ihe ndị na-adịghị mma nke ọrụ ndị ahịa. , ọ bụghị dị ka igwe nke ga-anọchi onye ahụ. Arụ ọrụ akpaaka bụ iwepụ ọrụ ndị dị ka agbụ email ogologo oge na usoro nnabata. Ngosipụta akọwapụtara nke ọma ma ọ bụ usoro nkuzi bụ otu ụzọ iji mee ka ndị ọrụ were anya ha hụ ụzọ ụbọchị ọrụ ha ga-esi melite. Angụkọ oge na ndị ọrụ ga - echekwa ọrụ nkịtị dị ka inyocha ihe okike ma ọ bụ nkwenye nkwekọrịta na - enye ndị na - ere ahịa nghọta dị ukwuu banyere etu teknụzụ ga - esi metụta ụbọchị ha.
Mana agụmakwụkwọ enweghị ike ịkwụsị na nzukọ ụbọchị ọkara ma ọ bụ ọzụzụ. Inye ndi oru ohere imuta ihe ha n’usoro site na ngbako ndi ozo na ihe ndi n’enye intaneti na enyere ndi ahia aka iwere usoro nkuchi. Na ederede ahụ, ndị na-ere ahịa kwesịrị itinye aka na ya mgbe ha na-emepe ihe ndị a. Ezie na mkpebi na-aga dijitalụ nwere ike si n'elu na ala na IT ngalaba ga-abụ ndị na-azụlite workflows, ahịa ga-emecha mara ha ojiji ikpe na oru ngo kwesịrị kasị mma. Mepụta ihe mmụta ahaziri iche maka ngalaba ọrụ azụmaahịa nke ọrụ ya karịa IT jargon na-enye ndị ọrụ ikpeazụ ihe kpatara itinyekwu ego na mbọ nnabata.
Usoro akọwapụtara: Iwu "mkpofu na, ihe mkpofu" metụtara kpam kpam na akpaaka arụmọrụ. Atingmezi usoro ntuziaka agbajiri ma ọ bụ nke akọwaghị nke ọma agaghị edozi nsogbu ahụ. Tupu enwee ike ịkọwapụta arụmọrụ, ngalaba ngalaba ga - enwe ike ịhazi usoro ha iji hụ na ọrụ izizi na-ebute usoro usoro kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aghọta usoro ọrụ ha n'ozuzu ha, usoro ndị a na-agụnye ọtụtụ obere ihe dị ka obere usoro a na-ewere maka nke a na-echefughị ​​echefu na mgbe a na-echefu ya n'oge ntụgharị dijitalụ. Dịka ọmụmaatụ, ngalaba ndị na-azụ ahịa na-achọkarị ndezi ndezi na otu mpempe akwụkwọ nkwekọrịta tupu na-agagharị na mbipụta oge. Agbanyeghị, usoro ndị emere iji wee pụọ na ndị otu metụtara usoro mmezi nwere ike ịdị iche gafere ọtụtụ ngalaba. Ọ bụrụ na ndị ahịa nwee ike ịkọwapụta usoro pụrụ iche maka ọrụ ọ bụla wee guzobe usoro ọrụ ya bụ usoro dị mfe.
Akpaghị aka n'usoro azụmahịa ọ bụla chọrọ nghọta miri emi banyere usoro, ndị mmadụ, na gọọmentị metụtara iji zere ọgba aghara nke nwere ike imetụta mmetụta ikpeazụ. Dịka a na-etinye teknụzụ na-arụ ọrụ, ndị ahịa kwesịrị ịdị oke egwu n'inyocha irè nke usoro akpaghị aka ma e jiri ya tụnyere ndị ọrụ aka ha. Na ọnọdụ kachasị mma, arụmọrụ na-arụ ọrụ bụ mbọ na-enyere ngalaba azụmaahịa aka mgbe niile.
Ohere enweghi ngwụcha
Esttọpụta arụmọrụ na-akpaghị aka nwere ike ịbụ mmalite nke ntụgharị dijitalụ buru ibu n'ime ebe ọrụ. A na-ejigide ngalaba azụmaahịa site na nwayọ nwayọ na arụghị ọrụ na-ahapụ obere oge maka atụmatụ na itinye n'ọrụ mkpọsa. Akpaaka, mgbe emebere nke ọma ma tinye ya n'ọrụ nke ọma iji mata ihe ịma aka ndị nwere ike ibilite, bụ usoro na ụzọ ziri ezi. Ozugbo usoro ọrụ na-arụ ọrụ ma na-aga nke ọma, ndị na-ere ahịa nwere ike ịmalite ịnụ ụtọ arụpụta na mmekorita ụba nke na-abịa na arụmọrụ arụmọrụ akpaghị aka.
Onye Odogwu Ugwu SpringCM
Onye Odogwu Ugwu SpringCM na-enye ahụmịhe onye ọrụ ọhụụ iji melite arụmọrụ maka omume emere na faịlụ, folda, ma ọ bụ site na sistemụ ndị ọzọ dị ka Salesforce. Mee ka ọrụ nhazi rụọ ọrụ, kpochapụ usoro arụmọrụ dị egwu, ma ọ bụ tinye akwụkwọ na akụkọ. Iji maa atụ, ị nwere ike ịmepụta iwu iji na-edugharị otu akwụkwọ ma ọ bụ otu akwụkwọ metụtara ya na folda ọzọ. Ma ọ bụ kọwaa nyocha, aha njirimara nke na-arụ ọrụ na sistemụ Njikọ Ndị Ahịa (CRM) ma jikọta ya na ụfọdụ akwụkwọ iji nyere aka na nsuso na ịkọ akụkọ.
Iwu Smart -enye gị ohere ime ịrịba usoro akpaaka na obere ma ọ bụ ọ dịghị nzuzo. Akpaghị aka na-aga contracts ma ọ bụ akwụkwọ ndị nọ n'ime ma ọ bụ n'èzí nke gị otu. Ọfụma na-arụ ọrụ dị elu bara uru n'oge nkwekọrịta ma ọ bụ ọgbọ akwụkwọ mgbe ị nwere ike iji data akọwapụtara iji belata njehie mmadụ, nkesa akpaaka maka nnabata, yana mbipụta ndị a kwadoro na Archive yana obere mmekọrịta onye ọrụ.
Nchọpụta ziri ezi na-enyere ndị ọrụ aka ịdebanye akwụkwọ ngwa ngwa site na ịchọ metadata dịka ụbọchị mbido nkwekọrịta ma ọ bụ aha ndị ahịa. Can nwere ike kọwaa otu esi akpado akwụkwọ dịka mkpa azụmahịa ha siri dị. Mkpado ndị a nwere ike ịmekọrịta na CRM iji mee ka otu ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ na otu data ndị ahịa ma ha nwere ike ịba ụba iji soro usoro nkwekọrịta nwere usoro enweghị ụkpụrụ ma ọ bụ mkparịta ụka.
Tags: arụ ọrụ arụmọrụCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịaahịa di omimiakụrụngwa ahịaahia ahiandị ahịaahịa ọrụ ahịammiriteknụzụ akpaaka arụ ọrụarụ ọrụ